दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा रुमल्लिरहेको कर्णाली
दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा रुमल्लिरहेको कर्णाली दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा रुमल्लिरहेको कर्णाली
आजको न्युज सोमबार, २५ भदौ २०७५
संसारका प्रायः सबैजसो विकसित देशहरु वा नेपालकै अधिकांश विकसित भूभागको विकासको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा ती ठाउँहरुमा दूरदर्शी नेतृत्वका कारण विकास सम्भव भएको देखिन्छ । राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिहरु विकासप्रेमी भए भने सम्बन्धित ठाउँले विकाससँग हातेमालो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा खोज्न महाथिर मोहम्मद वा सी जिनपिङ लगायतका वैदेशिक प्रमाणहरु खोजिरहनु पर्दैन । किनकी, नेपालमै पनि त्यस्ता प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिन्छन् । राजनीतिज्ञहरुले विकासनिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने यो कुनै असम्भव विषय हुन सक्दैन ।
वास्तवमा विकास भनेको कुनैपनि ठाउँको सकारात्मक परिवर्तन हो । अझ नेपाली शब्दकोषका अनुसार भन्ने हो भने विकास भन्नाले क्रमशः सुध्रँदै गएको परिस्थिति हो । नेपालको राजनीतिमा अत्यधिक खपत हुने यो शब्द खासगरि निर्वाचनहरुमा अझ धेरै बजार पाउने गर्छ । यथार्थमै सत्य कुरा के पनि हो भने कुनैपनि ठाउँको विकासको रणनीति त्यही ठाउँको राजनैतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । योजनावद्ध विकासको मोडेलबिना विकासका गफ गर्न सकिएला, तर विकास गर्न सकिदैन ।
नेपालमा विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको देखिने कर्णाली क्षेत्रको विकासले अझै मूलबाटो पक्रिन नसक्नुको कारण योजनाबद्ध विकासको मोडेल नैं तयार नहुनु हो । विकासको मोडेल तयार पार्न त्यस्तै सोच, चिन्तन र क्रियाशील नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । कर्णालीको मूल समस्या यही हो कि, जहाँ इतिहासदेखि आजसम्म क्रियाशील नेतृत्व भेटिएन । राज्यले हेयका दृष्टिले हेरेको, पर्याप्त बजेट नछुट्याएको र कर्णालीको आन्तरिक स्रोत र साधनलाई नचिनेको जस्ता आवाजहरु उठेपनि विकासका ठोस योजनाहरु कहिल्यै बन्न सकेनन् । यहाँका केही नेताहरुले कर्णालीको विकासमा राज्य अनुदार बन्ने गरेको आरोप लगाउने गरेपनि आफ्नै काम, कारबाही र भूमिकामाथि भने कहिल्यै समीक्षा गर्न सकेका छैनन् । भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भएकाले कर्णाली पछि परेको भन्ने गैरकर्णाली नेपालीहरुले समेत विकासमा यो क्षेत्र पछि पर्नुको कारण त्यहाँका जनताहरुमा जनचेतनाको विकासमा तीब्रता आउन नसककेको बताइरहेका छन् ।
समग्र कर्णाली क्षेत्रको भावी विकासको मोडेल आजको कर्णालीका निम्ति पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । विकासको नयाँ मोडेल निर्माणपूर्व आजसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट भएका मन्त्री र सांसदहरुको समय र राजनीतिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । अब निर्माण गर्न ढिलो नहुने विकासको दीर्घकालीन मोडेललाई नेतृत्व दिन सक्ने राजनैतिक नेतृत्वको निर्माण कर्णाली विकासको दोस्रो शर्त हो । उत्तरी छिमेकी चीनले कर्णालीकै शीरमा रेल कुदाइरहेका बेला कर्णालीवासीले आफ्ना सामान्य आवश्यकताबाट बञ्चित रहनुपर्ने कहिलेसम्म ? मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा समेत कर्णालीको एउटा सानो मोटरबाटोको लागि सिंहदरबार धाउने परिस्थिति किन विद्यमान छ ? बेरोजगारी समस्याका कारण विकासको सपना बुनिरहेको कर्णाली यूवाविहिन किन बन्दैछ ? ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् प्राकृतिक सम्पदाहरुको विशाल संग्रहालयले किन संरक्षण पाइरहेको छैन ? के यस्ता तमाम प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने राजनैतिक नेतृत्व हामीसँग छ ?
संसारको नजरमा सुन्दर देखिने मुुगुको राराताल राजधानीबाट भू–माफिया गएर कुरुप बनाउन लागिरहेका छन् । तालको जग्गा कब्जा गरेर होटल व्यवसाय गर्ने माफिया बढिरहेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जननी मानिने जुम्लाको सिंजाबारे कोही किन चूप छन् ? काठमाडौंका आर्टिफिसियल झरनाहरुमा सेल्फी खिच्नेहरुलाई किन चिनाउन सकिएको छैन कालीकोटको फ्वाल झरना ? धार्मिक महत्वका हिसावले प्रसिद्ध हुम्लाको मानसरोवर, पर्यटनको ऐतिहासिक आकर्षण बन्न सक्ने डोल्पाको से–फोक्सुण्डो र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वको मुगुको छायानाथ किन बन्नबाट बञ्चित छन्, संघीय संसदमा बहसका विषय ?
के कर्णालीका जनताले कुनै व्यक्तिलाई सांसद र मन्त्री बनाउन मात्रै उनीहरुलाई भोट हालेका हुन् ? होइन भने किन लाचार देखिन्छन् आफ्नै मतदाताप्रति नेताहरु ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै वर्गीय नाराहरु कर्णालीमै घन्काइएका थिए । तर, कालान्तरमा त्यस्ता नारा घन्काएर पदमा पुगेकाहरु नैं आज वर्ग समन्वयको बाटोबाट पूँजिपति बन्ने ध्याउन्नमा उद्दत देखिन्छन् । जनताको पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धि र पदलाई व्यक्तिगत उपलब्धि र आफ्नो रवाफमा परिणत गर्न लागिरहेका नेताहरु वास्तवमा कर्णालीको विकासको बाधक हुने देखिएका छन् ।
अब के गर्नुपर्छ त ?
लामो समयदेखि कर्णालीवासीले अपेक्षा गरिरहेका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरुको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । यसका निम्ति कर्णालीबाट राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सरोकारवालाहरुको बिचमा यहाँका समग्र साझा समस्याहरुबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । राज्यले कुनै आयोग निर्माण गरिदिन सक्छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरु जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई विधिमा टेकेर काम गर्न लगाइनुपर्दछ । विकासका नाममा बिनायोजना बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्नुपर्दछ । सम्पूर्ण विकासका सम्भावनाहरुबारे एकमुष्ट अध्ययन, योजना र विकास प्याकेजमै अघि बढाइनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, अब कर्णालीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्नेभन्दा पनि आफ्नै स्रोत, साधन र शक्तिलाई उपयोग गर्नतिर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । हामीले एनजीओ/आइएनजीओ लगायतका संस्थाको भर पर्न छोडेर यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई विकासको दीर्घकालीन गन्तव्यसँग जोड्नुपर्दछ । यहाँ एक व्यक्ति र कुनै पार्टीभन्दा पनि सम्पूर्ण कर्णाली समुदाय एकमत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, २५ भदौ २०७५
यस्तो हुनुपर्छ अबको बजेट
सरकारकाे असमान व्यवहार : मन्त्रीका जिल्लाबासी बसमा सरर, विपन्नहरू अलपत्र
१ घण्टा पनि नटिक्ने सरकारकाे दूरदर्शिता
निर्णय गर्दै फिर्ता गर्दै सरकार, गल्ती जति मिडियाको ?
प्रतिनिधिसभाकाे कार्यसूचीबाट हट्याे संविधान संशोधन प्रस्ताव